Monday April 09, 2018 - 12:04:01 in Wararka by Super Admin
Diyaarado dagaal ayaa duqeymo ba'an ugeystay mid kamida garoomada melleteri ee ugu waaweyn wadanka Suuriya.
Wararka ka imaanaya Suuriya ayaa sheegaya in diyaaradaha Yahuudda ay xalay gantaallo ku garaaceen garoonka melleteriga ee T4 halkaas oo ay ka haadaan inta badan diyaaradaha dagaalka Nidaamka Bishaar Al-asad ee xasuuqa ku haya shacabka Rayidka ah.
Telefeshinka Afka xukuumadda Suuriya ku hadla ayaa xaqiijiyay in duqeymo ba'an uu la kulmay madaarka T4 ee kuyaal gobolka Ximis ee bartamaha dalka Suuriya.
"Difaaca cirka ayaa iska caabiyay duqeyn cadowtooyo oo uu lakulmay garoonka T4 waxayna dhulka soo dhigeen illaa 8 saaruukh waxaana jira dhimasho iyo dhaawac ka dhalatay duqeynta" ayaa lagu yiri war kasoo baxay nidaamka Bishaar Al-asad.
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku beenisay in ay mas'uul ka aheyd duqeynta loo geystay garoonka diyaaradaha melleteriga Bishaar Al-asad uu u adeegsado duqeymaha hubka kiimikada ah.
Dhinaca kale dowladda Ruushka ayaa xaqiijisay in duqeyntii xalay ka dhacday bartamaha Suuriya ay geysteen diyaaradaha casriga maamulka Yahuudda.
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa war kooban oo ay soo saartay ku xaqiijisay in duqeynta ay geysteen laba diyaaradood oo Suuriya kasoo galay dhanka Hawada wadanka Lubnaan.
Duqeymahan ayaa imaanaya maalin kadib markii maamulka Bishaar Al-asad uu hubka Kiimikada ku xasuuqay shacab muslimiin ah oo ku sugnaa magaalada Duma ee duleedka magaalada Dimishiq ee caasimadda ah.
Xasuuqa ayaa galaaftay nolosha in kabadan 180 qof oo ubadan haween iyo carruur halka dhaawacyadu ay sii caga cageynayaan 500 oo qof, Nidaamka Al-asad ayaa adeegsaday gaaska Kaloorka loo yaqaan ee mamnuuca ka ah in loo adeegsado dagaallada.